” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် – ဇာတ်သိမ်းပိုင်း) – Na Pann San
” အင်းစိန်ထောင် အတွင်း မှ ပရလောကသားများ ” ( ဖြစ်ရပ်မှန် – ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)
Na Pann San W | April 1, 2020 | Knowledge | No Comments
မွေးနီ ၊ နက်ကျော် နဲ့ ဝင်းမြင့် တို့ အုတ်ရိုးပေါ် မှာ ရှိသလား….
“ နောက်ဆုံး ကရင်မ ယောက်ျား ကိုဝင်းမြင့် ဘာဖြစ်သွား သလဲ….”
စမ်းချောင်းသား ရဲ့ စကားကို လူလိမ် ဝိဇ္ဇာကျော်မြင့် ချက်ချင်းပြန်မဖြေနိုင် ပါဘူး။ သူ့မျက်နှာက ဝမ်းနည်းမှုတွေ၊ ကြေကွဲမှု တွေနဲ့ အသားတွေ တုန်လာ တယ်။ ပြီး တော့ အတိတ်က အရိပ်တွေ ပြန်မြင်လာတယ်။ အဲဒီနေ့က အဆောင် ကို ညတာဝန်ကျ လာတဲ့ ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က လူလိမ် ဝိဇ္ဇာကျော်မြင့် ရဲ့ အခန်းကို ရေးကြီးသုတ် ပြာရောက်လာတယ် ။ ပြီးတော့ ထောင်ရှေ့ မှာ ဝင်းမြင့် ကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ ပြောတယ် ။
“ မင်းကောင် ဝင်းမြင့် ပုံစံက မူမမှန် ဘူးကွ။ လူကလည်း ညှင်းသိုးသိုး နဲ့ ဖိနပ် လည်း မပါဘူး ။ ငါတို့ ညဂျူတီဝင်ခါနီး တွေ့တော့ သူ့မှာ ရှိတဲ့ ဆေးလိပ်တိုလေး တွေ လိုက်တိုက်တယ် ။ ပြီးတော့ မနှင်းဆီ ကို ခေါ်လာခဲ့ ပါဗျာလို့ပြောတယ် ။ ငါလည်း ဘာပြော လို့ပြောရမှန်းမသိတာ နဲ့ ထောင် ထဲ အမြန်ဝင်လာခဲ့တာ”
ညဝန်ထမ်း ဝါဒါဇော်နီ ရဲ့ စကားဆုံး တော့ ကျော်မြင့် ဘာစကားမှပြန်မပြော နိုင်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာတော့ “ မနှင်းဆီရယ် နင်လုပ်လိုက်တာ ထောင်တင် မကဘူး။ နင့်ယောက်ျားပါ ဒုက်္ခရောက်နေပြီ” ဆိုပြီး အောက်မေ့ လိုက်မိတယ် ။ နောက်ပိုင်းကျ တော့ ဝင်းမြင့်ရဲ့အကြောင်း နေ့စဉ်ရက် ဆက်ဆိုသလို ဆက်တိုက်ကြားလာရတယ်။ထောင်ဗူးဝမှာ တွေ့သမျှ ယူနီဖောင်းနဲ့ လူ တွေကို မနှင်း ဆီကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ပြော လိုပြော ၊ မနှင်းဆီ ကို တွေ့ချင်တယ်လို့ ပြော လိုပြော။ လူကလည်း အာဟာရပြတ်လပ်ပြီး ပိန်ချုံးနေတယ် လို့ ဆိုကြတယ် ။
အကြောင်း သိတဲ့ ထောင်ဝါဒါတွေကတော့ ထောင်ဗူးဝ မှာ အမြဲ လိုလိုရှိနေတဲ့ ဝင်းမြင့်ကို ဆေး လိပ်လေးတွေ တိုက်လိုက်၊ မုန့်လေးတွေ ကျွေးလိုက်နဲ့ သနားလို့ ကူညီကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သူ့စိတ်ပြေပျောက်အောင်တော့ ဘယ်သူက မှ နှစ်သိမ့်စကား မပြောနိုင်ပါ ဘူး။ မနှင်းဆီယောက်ျား ကိုဝင်းမြင့်ကတော့ မိုးရွာရွာ၊ နေပူပူ အင်းစိန်ထောင် ဗူးဝကြီး ရှေ့က လမ်းမပေါ်မှာ အမြဲရှိတယ်ဆိုတာ ထောင်ထဲ က ကြားနေရတယ်။အင်္ကျီတွေ၊ ပုဆိုးတွေကတော့ ဟောင်းနွမ်း စုတ်ပြတ် လို့။ ခြေဖဝါးဗလာနဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ မနှင်းဆီ ကားတိုက်ခံရတဲ့ နေရာလေးမှာ ငုတ်တုတ် ထိုင်ပြီး ရယ်လိုက်ငိုလိုက် လုပ်နေတယ်။ အရမ်းအေးတဲ့ ဒီဇင်ဘာညတစ်ညမှာတော့ ဝင်းမြင့်သေသွားပြီ ဆိုတဲ့သတင်း ထောင် ထဲရောက်လာတယ်။ အအေးပတ်ပြီး သေ တာတဲ့။
ဒါပေမဲ့ ၁ ဆောင် အခန်းလူကြီး လူလိမ်ဝိဇ်္ဇာကျော်မြင့်ကတော့ ဝင်းမြင့် အအေးပတ်ပြီး သေတယ်ဆိုတာကို လက် မခံဘူး။ အချုပ်သားတွေကမေးတော့ ဒီလို ဖြေတယ်။
“ ဝင်းမြင့်က သူ့မိန်းမကို ချစ်လွန်းလို့ ရင်ကွဲနာကျပြီး သေသွားတာ”
တချို့က ကျော်မြင့်ရဲ့စကားကို စော ဒကမတက်ရဲဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျော် မြင့်ရဲ့မျက်နှာမှာ ဝင်းမြင့်အတွက် မချိတင် ကဲ ခံစားနေရတာ ကိုယ်ချင်းစာလို့ပါပဲ။ လူလိမ်ဝိဇ်္ဇာကျော်မြင့် ဘဝမှာလည်း ခံစား ချက်တွေ ရှိနေပါ တယ်။သူ့ရဲ့မိခင် ဒေါ် ကြည်ဟာ လှိုင်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်း ဒလဘက် ကနေ ပန်းဆိုးတန်းဆိပ်ကမ်းမှာ သင်္ဘော သီးစိပ်ရောင်းရတဲ့ ဈေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကုန်ထမ်းတဲ့အလုပ်သမားတွေက ဒေါ်ကြည်ရဲ့ သင်္ဘောသီးမှ မစားရရင် အာသာမပြေပါဘူး။ ဒေါ်ကြည်ကတော့ သင်္ဘောသီးကို ဓားကလေးနဲ့ခွဲလိုက်၊ ရေ ဇလုံထဲမှာ နှစ်လိုက် နဲ့ တစ်နေ့လုံး လက်မ လည်အောင် ရောင်းချရပါတယ်။
အဲဒီ အချိန်က ကလေးသာသာ ကျော်မြင့်က နောက်ဆုံး မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ကြည်က ဓား ဆေးတဲ့ရေခွက်ထဲကို ဆေးသကြားခဲတွေ ခိုးထည့်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် လူတွေကို လိမ်ရတဲ့အရသာကို သိသွားခဲ့ပါ တယ်။မနှင်းဆီ(ခ) ကရင်မနဲ့ ကိုဝင်းမြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အသည်း ပေါက် မတတ်ချစ်ပေမယ့် ကုသိုလ် ကြမ်္မာဆိုးလှတာကြောင့် အင်းစိန်ထောင်ကို ဗဟိုပြုပြီး ဇာတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ ဘဝဖြစ်အင်ကတော့ ကြေကွဲစရာဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။
မနှင်းဆီရဲ့ ဘဝကြမ္မာမကောင်းခဲ့ သလို သူ့အစ်ကိုဖြစ်တဲ့ တစ်ချက်တစ်ကောင် ချစ်လေးမောင်ရဲ့ ဘဝကလည်း ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းလှပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာ မျိုးချစ်စိတ်ပြင်း တဲ့ ကရင်လူမျိုး တွေဖြစ်ပါတယ်။မနှင်းဆီ ရဲ့အစ်ကို ချစ်လေးမောင်ဟာ အဲ့ဒီအချိန် က ကရင်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေတဲ့KPLAတပ်ရင်း (၂)၊ တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက သေနတ်ပစ် အင်မတန် လက်ဖြောင့်တဲ့သူ ဖြစ်လို့ ဗမာစစ်သား အတော်များများဟာ သူနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ရင် သူ့လက်ချက်နဲ့ကျဆုံး ခဲ့ရတာများပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဧရာဝတီ တိုင်းမှာ ကရင်ဗိုလ်ကြီးချစ်လေးမောင်ဟာ တစ်ချက်တစ်ကောင်ချစ်လေးမောင်အဖြစ် နာမည်ကြီးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ လည်း ၁၉၆၈ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၇၂ ခုနှစ် အထိ အစိုးရကပြုလုပ်တဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဖြတ်လေးဖြတ် ပိတ်ဆို့ရေးမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါ တယ်။အဲဒီအချိန်က ဧရာဝတီတိုင်းမှာရှိတဲ့ ကော်သူးလေ မျိုးချစ်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KPLA)အပါအဝင် (KPGF) က ဗိုလ်မှူးကြီးကွက်ကော့၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ဂါးမင်း၊ တပ်မဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဖန်း ရှောင်း၊ ဗိုလ်မှူးစောဂျက်၊ ဗိုလ်ကြီးသန်းရှိန်၊ အမှတ် (၇) ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး မန်းဘခင် နဲ့ ပန်းတနော်မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းရှန်ဖောင်း တို့ဟာ ဖြတ်လေးဖြတ် စစ်ဆင်ရေးမှာ ကရင်မျိုးချစ်တပ်သား အမြောက်အမြား ကျဆုံးခဲ့ရ တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်အထိ အင်းစိန် နှစ်ကြီး အကျဉ်းသားတချို့ကတော့ ထောင်ထဲမှာ မနှင်းဆီ(ခ)ကရင်မ ရှိနေတုန်းပဲလို့ အခိုင် အမာ ဆိုပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငြင်း ခုံနေကြတာလည်း ရှိပါတယ်။မြန်မာ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ထောင်ရာဇ ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရည်ကျိုသောက်ထားတဲ့ လူတချို့က တော့ နှစ်ကြီးအကျဉ်းသားတွေပြောတာကို ခြွင်းချက် မရှိ လက်ခံပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆို တော့ အင်္ဂလိပ်ခေတ်လက်ထက်ကတည်း က မြန်မာနိုင်ငံမှာ စတင်တည် ဆောက်ခဲ့ တဲ့ ထောင်တွေဟာ တချို့ဆိုရင် နှစ် ၁၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိနေပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ထောင်ပေါင်း ၄၅ ထောင် ရှိပေမယ့် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ အကျဉ်းသားအရေ အတွက်ကို လိုက်ပြီး ကကြီးထောင်၊ ခခွေး ထောင်၊ ဂငယ်ထောင်ဆိုပြီး အဆင့်တွေ ခွဲခြားထားပါတယ်။ကကြီးထောင် ဆိုတာ ကတော့ လူဦးရေ ၅၀၀ အထက် ထိန်းသိမ်း ထားပြီး အင်္ဂလိပ်လက်ထက်က ဆောက် ခဲ့တဲ့ ထောင်ကြီး တွေ များပါတယ်။ဥပမာ အားဖြင့် သာယာဝတီ၊ တောင်ငူ၊ သရက်၊ မြင်းခြံ၊ ဟင်္သာတ၊ ပုသိမ်၊ မြစ်ကြီးနား၊ မော်လမြိုင်၊ မြိတ်၊ စစ်တွေ စတဲ့ထောင် တွေဟာ ကကြီးအဆင့်ထောင်တွေဖြစ်ပါ တယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ခံ အကျဉ်းဦးစီး ဌာနမှာ ကကြီးအဆင့် ထောင်တွေမှာပဲ ကြိုးစင်တွေ ရှိပါတယ်။ သဘောကတော့ ကကြီးအဆင့်ထောင်ပိုင်တွေကပဲ သေဒဏ် ကျအကျဉ်းသားကို ကြိုးပေးကွပ်မျက်လို့ ရတာဖြစ်ပါတယ်။သေဒဏ်ကျ အကျဉ်း သား တစ်ယောက်ကို ကြိုးပေးတဲ့အခါမှာ လည်း လိုက်နာရတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပရလောက စာအုပ်အစပိုင်းမှာ ဒီအကြောင်းတွေကို ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
အခုပြောချင် တာက တချို့ ကြိုးပေးခံရတဲ့အကျဉ်းသား တွေကိုပေးတဲ့ ပြစ်ဒဏ်ဟာ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ကြိုးပြစ်ဒဏ် မဟုတ်ဘဲ နှစ် ကြိုးနဲ့ ထောင်ဒဏ် ဘယ်နှနှစ် ဆိုတာမျိုးလည်း တရားသူ ကြီးက ချမှတ်တတ်ပါတယ်။သဘောကတော့ ကျူးလွန် တဲ့ အပြစ်ကြီးမားလွန်းတဲ့ အခါ ဒီလိုပြစ်ဒဏ်မျိုး ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြစ် ဒဏ်မျိုး အ ပေးခံရတဲ့ အကျဉ်း သားခမျာ ကြိုး တစ်ခါ ပေးလို့ မသေဘဲ လွတ် မြောက်ခဲ့ရင် တောင် ပြစ်ဒဏ် က မလွတ်မြောက်တဲ့အတွက် နောက် တစ်ကြိမ်ကြိုးဒဏ်အတွက် အပြစ်ပေး ခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ကြိုးပြစ်ဒဏ် ကျပြီး တစ်ကြိမ်ကြိုးပေးလို့ သေသွားရင် အား လုံးက ပြစ်ဒဏ် အားလုံး ပြီးပြီလို့ ထင်ကြတယ်။ အမှန် တကယ် တော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ် ပါဘူး။
တစ်ကြိုးပြစ် ဒဏ်နဲ့ပိုတဲ့ သေဒဏ် ကျအကျဉ်းသားတွေဟာ သေပြီးရင်တောင် သူ့ရဲ့ ဝိညာဉ်ကို ထောင်က ဝရမ်း ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အကျဉ်းချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါ တယ်။တစ်ခါတစ်ရံမှာ ထောင် က ကြိုးမိန့်ပေးပြီး သေသွားတဲ့ သူရဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတောင် ထောင် ပိုင်တွေက ထောင်ထဲမှာ လိုရာ ခိုင်းဖို့ လေဘာချထားလေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ထောင်ထဲမှာ သူတို့ကိုအများ အားဖြင့် လေဘာ ချထားတာကတော့ ထောင်အုတ်ရိုးတွေ ပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထောင်အုတ်ရိုးတွေဟာ အနည်းဆုံး ၁၈ ပေခန့်မြင့် ပြီး အရင်းတုတ်ပြီး အပေါ်ပိုင်း ရှူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အပေါ်မှာ အုတ်ခဲတစ်ခဲ တင်လို့ရအောင် အကျယ် အဝန်းရှိပြီး အုတ်ခဲတွေကို လည်း တစ်ခဲနဲ့တစ်ခဲ မေးတင်ပြီး စီထားလေ့ရှိပါတယ်။
တချို့က တော့ ထောင်အုတ်ရိုးပေါ်မှာ လူ တက်ထိုင်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တချို့ ကကြီးအဆင့် ထောင်တွေမှာ အကျဉ်းသား တွေဟာ ထောင်ထဲကလွတ်ဖို့ နည်းလမ်း ပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့လည်း အံ့သြစရာကောင်းလောက် အောင် လွတ်မြောက်သွားတာတွေ ရှိပါ တယ်။ တချို့လည်း ညကင်းတွေ မိသွား တာတွေ ရှိပါတယ်။
ထူးခြားတာတစ်ခုက တော့ တချို့ထောင်တွေမှာ အုတ်ရိုးပေါ် ကျော်တက်ပြီး ထွက်ပြေးတဲ့ အကျဉ်းသား တချို့ကို အပြင်ရောက်ခါနီးမှ အုတ်ရိုးပေါ် ကတွန်းချလို့ ထောင်ထဲပြန်ကျပြီး လူမိသွား တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေလည်း သက်သေအထောက် အထားနဲ့ ရှိပါတယ်။အဲဒီဖြစ်ရပ်တွေကို တော့ ထောင်ကစီရင်ထားတဲ့ အစောင့်သရဲ တွေက ပြန်တွန်းချတာလို့ ယုံကြည်ကြပါ တယ်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်ကတည်း က ထောင်ကို တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ ပရလောကနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီအမံတွေ၊ အောက်လမ်းနည်းတွေကို အင်္ဂလိပ်တွေ ကိုယ်တိုင် ယုံယုံကြည်ကြည် လက်ခံပြီး လုပ်ခဲ့တာ တွေရှိပါတယ်။
တချို့နေရာတွေ မှာ အုတ်ရိုးအောက်မှာ အစီအမံတွေလုပ်၊ လူတွေကို မြှုပ်လုပ်သွား တာတွေလည်း ရှိ တယ်လို့ ပါးစပ်ဒဏ္ဍာရီတွေ ကြားခဲ့ရပါ တယ်။
သူတို့ဟာ မလွတ်မကျွတ်တော့ဘဲ အုတ်ရိုးစောင့်ရပြီး အကျဉ်းသားတွေ မလွတ်အောင် ကင်းစောင့်ပြီး တာဝန်ထမ်း ရွက်ရပါတယ်။
အင်းစိန်ထောင်မှာဆိုရင် ထောင်ထဲဝင်လာတဲ့ အကျဉ်းသားရဲ့ ဘုန်း တန်ခိုး၊ ကံကြမ်္မာစန်း၊ နက်္ခတ်နိမ့်ကျအောင် တံခါး ၉ ပေါက်ကို ဝင်ရတဲ့ အစီအမံ လုပ် ထားတာ ယနေ့အချိန်ထိ အထင်အရှားရှိပါ တယ်။တချို့တံခါးတွေဟာ သာမန်လူအရပ် ထက် ပိုသေးအောင် တည်ဆောက်ထားပြီး အချုပ်သား အကျဉ်းသားတွေကို နာမ်နှိမ် တဲ့အနေနဲ့ ခေါင်းငုံ့ဝင်စေပါတယ်။
ထောင်မှာလိုပဲ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ တံတားဆောက်ရင် လူတွေ စတေးပြီး တံတားအစောင့်ထားခဲ့တယ်။ လမ်းဖောက် ရင်လည်း စတေးပြီး လမ်းစောင့်ထားခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ထောင်မှာလည်း စတေးခံခဲ့ရတဲ့ သေဆုံးသူတွေရဲ့ ဝိညာဉ် တွေ လှည့်လည်နေပါတယ်။ ဒီဝိညာဉ်တွေ ထဲက ထောင်ကျ အကျဉ်းသားတွေနဲ့ မစိမ်း တဲ့ ပရလောကသားနှစ်ယောက် ရှိခဲ့ပါ တယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အမည်ကတော့ နက်ကျော်နဲ့ မွေးနီလို့ ခေါ်ပါတယ်။ နက် ကျော်ရဲ့ နာမည်အရင်းက နက်တုံး။
သူက ဧရာဝတီသား။ ထောင်ထဲမှာသူ့ကိုအင်္ဂလိပ် အစိုးရလက်ထက်ကတည်းက လေဘာချ ထားတယ်လို့ ပြောတယ်။ သူ့ကို တစ်ခါ တစ်ရံမှာ တချို့အကျဉ်းသားတွေ တွေ့ကြ ရတယ်။တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ အနက်တုံး ကြီးတစ်တုံးပဲ။ ပရလောကထဲမှာ အမည်း ဆုံး။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ထောင်ထဲမှာ နက် တုံးလို့ ခေါ်တယ်။ နောက်တစ်ယောက်က တော့ တင်မောင်နီ။ သူက လွတ်လပ်ရေးရ ပြီးနောက်ပိုင်း ဗမာအစိုးရတွေလက်ထက် ရောက်မှ သေဒဏ်ကျတယ်။
သူကလည်း အတော်ထူးဆန်းတယ်။ ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့ ထောင်စောင့်သရဲ ပရလောကသားတွေထဲ မှာ အထူးဆန်းဆုံးလို့ ဆိုရမယ်။ သူ့တစ် ကိုယ်လုံးမှာ အမွေးတွေရှိပြီး နီရဲနေတယ်။ဒါကြောင့် သူ့ကို သရဲမွေးနီလို့ ခေါ်တယ်။ သူလည်း တင်မောင်နီကနေ မွေးနီဖြစ်သွား တယ်။ နက်တုံးကလည်း နက်ကျော် ဖြစ် သွားတယ်။ သူတို့က ထောင်ကို သေချာ စောင့်ရှောက်ပြီး အုတ်ရိုးကျော်တက်ပြေး တဲ့ အကျဉ်းသားဆိုရင် တွန်းချတာတို့၊ လည်ပင်းညှစ်တာတို့ လုပ်တယ်။
တောင်ငူထောင်မှာဆိုရင်လည်း သေ ဒဏ်ပေးခံလိုက်ရတဲ့ သံတောင်ကရင်မ ဆို တာရှိတယ်။ သူ့ အကြောင်းကို တောင်ငူ ထောင်မှာ နေခဲ့တဲ့သူတိုင်း ကြားဖူးကြပါ တယ်။ကရင်မက သံတောင်ဇာတိဖြစ်ပြီး တောင်ငူမြို့ကို ဗုံးခွဲဖို့ လက်ပစ်ဗုံးတွေကို ကွမ်းသီးတောင်းထဲထည့်သယ်လာပြီး ခွဲခဲ့ တာလို့ သိရတယ်။ သူလည်း မဆလခေတ် က သေဒဏ်ပေးခံရပြီး တောင်ငူထောင် အစောင့်အဖြစ် အခုထိရှိနေတုန်းပဲလို့ ဆို တယ်။ပြစ်ဒဏ်မလွတ်သေးတဲ့ ဝိညာဉ်တွေ ကို ချုပ်ထားတဲ့ ဝရမ်းတွေကို အင်းစိန် ထောင် ရိက်္ခာဂိုဒေါင်အပေါ်ထပ်မှာ သိမ်း ထားတယ်။ သူတို့တွေကို လွှတ်ပေးသင့်တဲ့ အချိန်ရောက်ရင် အပေါ်ထပ်တက် ဝရမ်း ယူပြီး ထောင်ကနေ အမိန့်ပြန်တမ်းနဲ့ ကောင်းရာမွန်ရာ ဘဝကိုရောက်ရှိဖို့ စီမံ ပေးလေ့ရှိတယ်။
တချို့ကြိုးဒဏ်နဲ့ ထောင်ဒဏ် ကျန်သေးတဲ့ ဝိညာဉ်တွေကိုတော့ လွှတ်မပေးဘဲ ရုံးမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်။ ဒီလိုထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဝိညာဉ်တွေဟာ ထောင်ထဲမှာပဲနေပြီး တချို့ကို ထောင်ကျ အကျဉ်းသားတွေ ကြုံဆုံခဲ့ကြရတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထောင်ထဲက ပရလောကသားတွေရဲ့ အကြောင်းကတော့ ယခုအချိန်အထိ ထောင်ကျ အကျဉ်းသား တွေရဲ့ ပါးစပ်ဖျားမှာ ရှိနေမြဲပါပဲ။
(သူတို့ပြောသော ထောင်အတွင်းမှ ပရလောကသားများ ဇာတ်လမ်းတွင် အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြရမည့် လူလိမ် ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခဲ့ရသည့် ကျော်မြင့် နှင့် မိခင် ဒေါ်ကြည်၏ ဘဝဇာတ်လမ်းစုံ၊ ထောင် အုတ်တံတိုင်းပေါ်က ထွက်ပြေးတဲ့ အကျဉ်း သားတိုင်းကို ထောင်ထဲပြန်တွန်းချတဲ့ သရဲ မွေးနီ၊ နက်တုံး၊ သံတောင်ကရင်မနှင့် ကကြီးထောင်တွေမှာ ကျင်လည်နေသော ပရလောကသားများအကြောင်းကို မကြာခင်ထွက်ရှိမည့် လုံးချင်း ဝတ္ထုတွင် အပြည့်အစုံ ရေးသားဖော်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စာဖတ်သူများအား လေးစားစွာအသိပေး အပ်ပါသည်။)
Credit – ဇော်သက်ထွေး
အခန်း ( ၁ ) မှ အစအဆုံး ဖတ်ရှုလိုပါက ဒီမှာနှိပ်ပါ
မှေးနီ ၊ နကျကြျော နဲ့ ဝငျးမွငျ့ တို့ အုတျရိုးပျေါ မှာ ရှိသလား….
“ နောကျဆုံး ကရငျမ ယောကျြား ကိုဝငျးမွငျ့ ဘာဖွဈသှား သလဲ….”
စမျးခြောငျးသား ရဲ့ စကားကို လူလိမျ ဝိဇ်ဇာကြျောမွငျ့ ခကျြခငျြးပွနျမဖွနေိုငျ ပါဘူး။ သူ့မကျြနှာက ဝမျးနညျးမှုတှေ၊ ကွကှေဲမှု တှနေဲ့ အသားတှေ တုနျလာ တယျ။ ပွီး တော့ အတိတျက အရိပျတှေ ပွနျမွငျလာတယျ။ အဲဒီနကေ့ အဆောငျ ကို ညတာဝနျကြ လာတဲ့ ဝနျထမျး တဈယောကျက လူလိမျ ဝိဇ်ဇာကြျောမွငျ့ ရဲ့ အခနျးကို ရေးကွီးသုတျ ပွာရောကျလာတယျ ။ ပွီးတော့ ထောငျရှေ့ မှာ ဝငျးမွငျ့ ကိုတှခေဲ့တယျလို့ ပွောတယျ ။
“ မငျးကောငျ ဝငျးမွငျ့ ပုံစံက မူမမှနျ ဘူးကှ။ လူကလညျး ညှငျးသိုးသိုး နဲ့ ဖိနပျ လညျး မပါဘူး ။ ငါတို့ ညဂြူတီဝငျခါနီး တှတေ့ော့ သူ့မှာ ရှိတဲ့ ဆေးလိပျတိုလေး တှေ လိုကျတိုကျတယျ ။ ပွီးတော့ မနှငျးဆီ ကို ချေါလာခဲ့ ပါဗြာလို့ပွောတယျ ။ ငါလညျး ဘာပွော လို့ပွောရမှနျးမသိတာ နဲ့ ထောငျ ထဲ အမွနျဝငျလာခဲ့တာ”
ညဝနျထမျး ဝါဒါဇျောနီ ရဲ့ စကားဆုံး တော့ ကြျောမွငျ့ ဘာစကားမှပွနျမပွော နိုငျဘူး။ စိတျထဲမှာတော့ “ မနှငျးဆီရယျ နငျလုပျလိုကျတာ ထောငျတငျ မကဘူး။ နငျ့ယောကျြားပါ ဒုက်ျခရောကျနပွေီ” ဆိုပွီး အောကျမေ့ လိုကျမိတယျ ။ နောကျပိုငျးကြ တော့ ဝငျးမွငျ့ရဲ့အကွောငျး နစေ့ဉျရကျ ဆကျဆိုသလို ဆကျတိုကျကွားလာရတယျ။ထောငျဗူးဝမှာ တှသေ့မြှ ယူနီဖောငျးနဲ့ လူ တှကေို မနှငျး ဆီကို စောငျ့ရှောကျဖို့ ပွော လိုပွော ၊ မနှငျးဆီ ကို တှခေ့ငျြတယျလို့ ပွော လိုပွော။ လူကလညျး အာဟာရပွတျလပျပွီး ပိနျခြုံးနတေယျ လို့ ဆိုကွတယျ ။
အကွောငျး သိတဲ့ ထောငျဝါဒါတှကေတော့ ထောငျဗူးဝ မှာ အမွဲ လိုလိုရှိနတေဲ့ ဝငျးမွငျ့ကို ဆေး လိပျလေးတှေ တိုကျလိုကျ၊ မုနျ့လေးတှေ ကြှေးလိုကျနဲ့ သနားလို့ ကူညီကွပါတယျ။ဒါပမေဲ့ သူ့စိတျပွပြေောကျအောငျတော့ ဘယျသူက မှ နှဈသိမျ့စကား မပွောနိုငျပါ ဘူး။ မနှငျးဆီယောကျြား ကိုဝငျးမွငျ့ကတော့ မိုးရှာရှာ၊ နပေူပူ အငျးစိနျထောငျ ဗူးဝကွီး ရှကေ့ လမျးမပျေါမှာ အမွဲရှိတယျဆိုတာ ထောငျထဲ က ကွားနရေတယျ။အင်ျကြီတှေ၊ ပုဆိုးတှကေတော့ ဟောငျးနှမျး စုတျပွတျ လို့။ ခွဖေဝါးဗလာနဲ့ တဈခါတဈခါ မနှငျးဆီ ကားတိုကျခံရတဲ့ နရောလေးမှာ ငုတျတုတျ ထိုငျပွီး ရယျလိုကျငိုလိုကျ လုပျနတေယျ။ အရမျးအေးတဲ့ ဒီဇငျဘာညတဈညမှာတော့ ဝငျးမွငျ့သသှေားပွီ ဆိုတဲ့သတငျး ထောငျ ထဲရောကျလာတယျ။ အအေးပတျပွီး သေ တာတဲ့။
ဒါပမေဲ့ ၁ ဆောငျ အခနျးလူကွီး လူလိမျဝိဇ်ျဇာကြျောမွငျ့ကတော့ ဝငျးမွငျ့ အအေးပတျပွီး သတေယျဆိုတာကို လကျ မခံဘူး။ အခြုပျသားတှကေမေးတော့ ဒီလို ဖွတေယျ။
“ ဝငျးမွငျ့က သူ့မိနျးမကို ခဈြလှနျးလို့ ရငျကှဲနာကပြွီး သသှေားတာ”
တခြို့က ကြျောမွငျ့ရဲ့စကားကို စော ဒကမတကျရဲဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကြျော မွငျ့ရဲ့မကျြနှာမှာ ဝငျးမွငျ့အတှကျ မခြိတငျ ကဲ ခံစားနရေတာ ကိုယျခငျြးစာလို့ပါပဲ။ လူလိမျဝိဇ်ျဇာကြျောမွငျ့ ဘဝမှာလညျး ခံစား ခကျြတှေ ရှိနပေါ တယျ။သူ့ရဲ့မိခငျ ဒျေါ ကွညျဟာ လှိုငျမွဈတဈဖကျကမျး ဒလဘကျ ကနေ ပနျးဆိုးတနျးဆိပျကမျးမှာ သငေ်ျဘာ သီးစိပျရောငျးရတဲ့ ဈေးသညျဖွဈပါတယျ။ဒါပမေဲ့ ကုနျထမျးတဲ့အလုပျသမားတှကေ ဒျေါကွညျရဲ့ သငေ်ျဘာသီးမှ မစားရရငျ အာသာမပွပေါဘူး။ ဒျေါကွညျကတော့ သငေ်ျဘာသီးကို ဓားကလေးနဲ့ခှဲလိုကျ၊ ရေ ဇလုံထဲမှာ နှဈလိုကျ နဲ့ တဈနလေုံ့း လကျမ လညျအောငျ ရောငျးခရြပါတယျ။
အဲဒီ အခြိနျက ကလေးသာသာ ကြျောမွငျ့က နောကျဆုံး မိခငျဖွဈသူဒျေါကွညျက ဓား ဆေးတဲ့ရခှေကျထဲကို ဆေးသကွားခဲတှေ ခိုးထညျ့ထားတာကို တှခေဲ့ရပွီးတဲ့နောကျ လူတှကေို လိမျရတဲ့အရသာကို သိသှားခဲ့ပါ တယျ။မနှငျးဆီ(ခ) ကရငျမနဲ့ ကိုဝငျးမွငျ့တို့ ဇနီးမောငျနှံ တဈယောကျကိုတဈယောကျ အသညျး ပေါကျ မတတျခဈြပမေယျ့ ကုသိုလျ ကွမ်ျမာဆိုးလှတာကွောငျ့ အငျးစိနျထောငျကို ဗဟိုပွုပွီး ဇာတျသိမျးခဲ့ရတဲ့ ဘဝဖွဈအငျကတော့ ကွကှေဲစရာဒဏ်ဍာရီတဈပုဒျအဖွဈ မှတျတမျးဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။
မနှငျးဆီရဲ့ ဘဝကွမ်မာမကောငျးခဲ့ သလို သူ့အဈကိုဖွဈတဲ့ တဈခကျြတဈကောငျ ခဈြလေးမောငျရဲ့ ဘဝကလညျး ဝမျးနညျးဖို့ ကောငျးလှပါတယျ။ တကယျတော့ သူတို့ မောငျနှမနှဈယောကျဟာ မြိုးခဈြစိတျပွငျး တဲ့ ကရငျလူမြိုး တှဖွေဈပါတယျ။မနှငျးဆီ ရဲ့အဈကို ခဈြလေးမောငျဟာ အဲ့ဒီအခြိနျ က ကရငျလှတျမွောကျရေးအတှကျ တိုကျပှဲ ဝငျနတေဲ့KPLAတပျရငျး (၂)၊ တပျခှဲမှူး ဗိုလျကွီးတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ သူက သနေတျပဈ အငျမတနျ လကျဖွောငျ့တဲ့သူ ဖွဈလို့ ဗမာစဈသား အတျောမြားမြားဟာ သူနဲ့ရငျဆိုငျတှရေ့ငျ သူ့လကျခကျြနဲ့ကဆြုံး ခဲ့ရတာမြားပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဧရာဝတီ တိုငျးမှာ ကရငျဗိုလျကွီးခဈြလေးမောငျဟာ တဈခကျြတဈကောငျခဈြလေးမောငျအဖွဈ နာမညျကွီးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ လညျး ၁၉၆၈ ခုနှဈကနေ ၁၉၇၂ ခုနှဈ အထိ အစိုးရကပွုလုပျတဲ့ မွဈဝကြှနျးပျေါ ဖွတျလေးဖွတျ ပိတျဆို့ရေးမှာ အစိုးရတပျနဲ့ ရငျဆိုငျတှပွေီ့း ကဆြုံးသှားခဲ့ရတာ ဖွဈပါ တယျ။အဲဒီအခြိနျက ဧရာဝတီတိုငျးမှာရှိတဲ့ ကျောသူးလေ မြိုးခဈြလှတျမွောကျရေး တပျမတျော (KPLA)အပါအဝငျ (KPGF) က ဗိုလျမှူးကွီးကှကျကော့၊ ဒုဗိုလျမှူးကွီး ဂါးမငျး၊ တပျမဟာမှူး ဗိုလျမှူးကွီး ဖနျး ရှောငျး၊ ဗိုလျမှူးစောဂကျြ၊ ဗိုလျကွီးသနျးရှိနျ၊ အမှတျ (၇) ခရိုငျအတှငျးရေးမှူး မနျးဘခငျ နဲ့ ပနျးတနျောမွို့နယျ ဥက်ကဋ်ဌ မနျးရှနျဖောငျး တို့ဟာ ဖွတျလေးဖွတျ စဈဆငျရေးမှာ ကရငျမြိုးခဈြတပျသား အမွောကျအမွား ကဆြုံးခဲ့ရ တာဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျအထိ အငျးစိနျ နှဈကွီး အကဉျြးသားတခြို့ကတော့ ထောငျထဲမှာ မနှငျးဆီ(ခ)ကရငျမ ရှိနတေုနျးပဲလို့ အခိုငျ အမာ ဆိုပါတယျ။ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ငွငျး ခုံနကွေတာလညျး ရှိပါတယျ။မွနျမာ နိုငျငံမှာရှိတဲ့ ထောငျရာဇ ဝငျနဲ့ပတျသကျပွီး အရညျကြိုသောကျထားတဲ့ လူတခြို့က တော့ နှဈကွီးအကဉျြးသားတှပွေောတာကို ခွှငျးခကျြ မရှိ လကျခံပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆို တော့ အင်ျဂလိပျခတျေလကျထကျကတညျး က မွနျမာနိုငျငံမှာ စတငျတညျ ဆောကျခဲ့ တဲ့ ထောငျတှဟော တခြို့ဆိုရငျ နှဈ ၁၀၀ ကြျော သကျတမျးရှိနပေါပွီ။
မွနျမာနိုငျငံ မှာ ထောငျပေါငျး ၄၅ ထောငျ ရှိပမေယျ့ ထိနျးသိမျးထားနိုငျတဲ့ အကဉျြးသားအရေ အတှကျကို လိုကျပွီး ကကွီးထောငျ၊ ခခှေး ထောငျ၊ ဂငယျထောငျဆိုပွီး အဆငျ့တှေ ခှဲခွားထားပါတယျ။ကကွီးထောငျ ဆိုတာ ကတော့ လူဦးရေ ၅၀၀ အထကျ ထိနျးသိမျး ထားပွီး အင်ျဂလိပျလကျထကျက ဆောကျ ခဲ့တဲ့ ထောငျကွီး တှေ မြားပါတယျ။ဥပမာ အားဖွငျ့ သာယာဝတီ၊ တောငျငူ၊ သရကျ၊ မွငျးခွံ၊ ဟင်ျသာတ၊ ပုသိမျ၊ မွဈကွီးနား၊ မျောလမွိုငျ၊ မွိတျ၊ စဈတှေ စတဲ့ထောငျ တှဟော ကကွီးအဆငျ့ထောငျတှဖွေဈပါ တယျ။
တဈနညျးအားဖွငျ့ ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာန လကျအောကျခံ အကဉျြးဦးစီး ဌာနမှာ ကကွီးအဆငျ့ ထောငျတှမှောပဲ ကွိုးစငျတှေ ရှိပါတယျ။ သဘောကတော့ ကကွီးအဆငျ့ထောငျပိုငျတှကေပဲ သဒေဏျ ကအြကဉျြးသားကို ကွိုးပေးကှပျမကျြလို့ ရတာဖွဈပါတယျ။သဒေဏျကြ အကဉျြး သား တဈယောကျကို ကွိုးပေးတဲ့အခါမှာ လညျး လိုကျနာရတဲ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျး တှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ပရလောက စာအုပျအစပိုငျးမှာ ဒီအကွောငျးတှကေို ရေးသားဖျောပွခဲ့ပွီးပါပွီ။
အခုပွောခငျြ တာက တခြို့ ကွိုးပေးခံရတဲ့အကဉျြးသား တှကေိုပေးတဲ့ ပွဈဒဏျဟာ တဈခါတဈရံ တဈကွိုးပွဈဒဏျ မဟုတျဘဲ နှဈ ကွိုးနဲ့ ထောငျဒဏျ ဘယျနှနှဈ ဆိုတာမြိုးလညျး တရားသူ ကွီးက ခမြှတျတတျပါတယျ။သဘောကတော့ ကြူးလှနျ တဲ့ အပွဈကွီးမားလှနျးတဲ့ အခါ ဒီလိုပွဈဒဏျမြိုး ခမြှတျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုပွဈ ဒဏျမြိုး အ ပေးခံရတဲ့ အကဉျြး သားခမြာ ကွိုး တဈခါ ပေးလို့ မသဘေဲ လှတျ မွောကျခဲ့ရငျ တောငျ ပွဈဒဏျ က မလှတျမွောကျတဲ့အတှကျ နောကျ တဈကွိမျကွိုးဒဏျအတှကျ အပွဈပေး ခံရမှာ ဖွဈပါတယျ။
နှဈကွိုးပွဈဒဏျ ကပြွီး တဈကွိမျကွိုးပေးလို့ သသှေားရငျ အား လုံးက ပွဈဒဏျ အားလုံး ပွီးပွီလို့ ထငျကွတယျ။ အမှနျ တကယျ တော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတျ ပါဘူး။
တဈကွိုးပွဈ ဒဏျနဲ့ပိုတဲ့ သဒေဏျ ကအြကဉျြးသားတှဟော သပွေီးရငျတောငျ သူ့ရဲ့ ဝိညာဉျကို ထောငျက ဝရမျး ကို ထိနျးသိမျးထားပွီး အကဉျြးခပြိုငျခှငျ့ရှိတယျလို့ ဆိုပါ တယျ။တဈခါတဈရံမှာ ထောငျ က ကွိုးမိနျ့ပေးပွီး သသှေားတဲ့ သူရဲ့ဝိညာဉျတှကေိုတောငျ ထောငျ ပိုငျတှကေ ထောငျထဲမှာ လိုရာ ခိုငျးဖို့ လဘောခထြားလရှေိ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ထောငျထဲမှာ သူတို့ကိုအမြား အားဖွငျ့ လဘော ခထြားတာကတော့ ထောငျအုတျရိုးတှေ ပျေါမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ထောငျအုတျရိုးတှဟော အနညျးဆုံး ၁၈ ပခေနျ့မွငျ့ ပွီး အရငျးတုတျပွီး အပျေါပိုငျး ရှူးပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အပျေါမှာ အုတျခဲတဈခဲ တငျလို့ရအောငျ အကယျြ အဝနျးရှိပွီး အုတျခဲတှကေို လညျး တဈခဲနဲ့တဈခဲ မေးတငျပွီး စီထားလရှေိ့ပါတယျ။
တခြို့က တော့ ထောငျအုတျရိုးပျေါမှာ လူ တကျထိုငျလို့ရတယျလို့ပွောပါတယျ။ တခြို့ ကကွီးအဆငျ့ ထောငျတှမှော အကဉျြးသား တှဟော ထောငျထဲကလှတျဖို့ နညျးလမျး ပေါငျးစုံနဲ့ ကွိုးပမျးခဲ့ကွတာတှေ ရှိပါတယျ။ တခြို့လညျး အံ့သွစရာကောငျးလောကျ အောငျ လှတျမွောကျသှားတာတှေ ရှိပါ တယျ။ တခြို့လညျး ညကငျးတှေ မိသှား တာတှေ ရှိပါတယျ။
ထူးခွားတာတဈခုက တော့ တခြို့ထောငျတှမှော အုတျရိုးပျေါ ကြျောတကျပွီး ထှကျပွေးတဲ့ အကဉျြးသား တခြို့ကို အပွငျရောကျခါနီးမှ အုတျရိုးပျေါ ကတှနျးခလြို့ ထောငျထဲပွနျကပြွီး လူမိသှား တဲ့ဖွဈရပျတှလေညျး သကျသအေထောကျ အထားနဲ့ ရှိပါတယျ။အဲဒီဖွဈရပျတှကေို တော့ ထောငျကစီရငျထားတဲ့ အစောငျ့သရဲ တှကေ ပွနျတှနျးခတြာလို့ ယုံကွညျကွပါ တယျ။ အင်ျဂလိပျအစိုးရလကျထကျကတညျး က ထောငျကို တညျဆောကျတဲ့အခါမှာ ပရလောကနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အစီအမံတှေ၊ အောကျလမျးနညျးတှကေို အင်ျဂလိပျတှေ ကိုယျတိုငျ ယုံယုံကွညျကွညျ လကျခံပွီး လုပျခဲ့တာ တှရှေိပါတယျ။
တခြို့နရောတှေ မှာ အုတျရိုးအောကျမှာ အစီအမံတှလေုပျ၊ လူတှကေို မွှုပျလုပျသှား တာတှလေညျး ရှိ တယျလို့ ပါးစပျဒဏ်ဍာရီတှေ ကွားခဲ့ရပါ တယျ။
သူတို့ဟာ မလှတျမကြှတျတော့ဘဲ အုတျရိုးစောငျ့ရပွီး အကဉျြးသားတှေ မလှတျအောငျ ကငျးစောငျ့ပွီး တာဝနျထမျး ရှကျရပါတယျ။
အငျးစိနျထောငျမှာဆိုရငျ ထောငျထဲဝငျလာတဲ့ အကဉျြးသားရဲ့ ဘုနျး တနျခိုး၊ ကံကွမ်ျမာစနျး၊ နက်ျခတျနိမျ့ကအြောငျ တံခါး ၉ ပေါကျကို ဝငျရတဲ့ အစီအမံ လုပျ ထားတာ ယနအေ့ခြိနျထိ အထငျအရှားရှိပါ တယျ။တခြို့တံခါးတှဟော သာမနျလူအရပျ ထကျ ပိုသေးအောငျ တညျဆောကျထားပွီး အခြုပျသား အကဉျြးသားတှကေို နာမျနှိမျ တဲ့အနနေဲ့ ခေါငျးငုံ့ဝငျစပေါတယျ။
ထောငျမှာလိုပဲ အင်ျဂလိပျတှဟော တံတားဆောကျရငျ လူတှေ စတေးပွီး တံတားအစောငျ့ထားခဲ့တယျ။ လမျးဖောကျ ရငျလညျး စတေးပွီး လမျးစောငျ့ထားခဲ့တယျ လို့ဆိုပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ထောငျမှာလညျး စတေးခံခဲ့ရတဲ့ သဆေုံးသူတှရေဲ့ ဝိညာဉျ တှေ လှညျ့လညျနပေါတယျ။ ဒီဝိညာဉျတှေ ထဲက ထောငျကြ အကဉျြးသားတှနေဲ့ မစိမျး တဲ့ ပရလောကသားနှဈယောကျ ရှိခဲ့ပါ တယျ။
သူတို့နှဈယောကျရဲ့ အမညျကတော့ နကျကြျောနဲ့ မှေးနီလို့ ချေါပါတယျ။ နကျ ကြျောရဲ့ နာမညျအရငျးက နကျတုံး။
သူက ဧရာဝတီသား။ ထောငျထဲမှာသူ့ကိုအင်ျဂလိပျ အစိုးရလကျထကျကတညျးက လဘောခြ ထားတယျလို့ ပွောတယျ။ သူ့ကို တဈခါ တဈရံမှာ တခြို့အကဉျြးသားတှေ တှကွေ့ ရတယျ။တှတေဲ့အခါမှာတော့ အနကျတုံး ကွီးတဈတုံးပဲ။ ပရလောကထဲမှာ အမညျး ဆုံး။ ဒါကွောငျ့ သူ့ကို ထောငျထဲမှာ နကျ တုံးလို့ ချေါတယျ။ နောကျတဈယောကျက တော့ တငျမောငျနီ။ သူက လှတျလပျရေးရ ပွီးနောကျပိုငျး ဗမာအစိုးရတှလေကျထကျ ရောကျမှ သဒေဏျကတြယျ။
သူကလညျး အတျောထူးဆနျးတယျ။ ထောငျထဲမှာရှိတဲ့ ထောငျစောငျ့သရဲ ပရလောကသားတှထေဲ မှာ အထူးဆနျးဆုံးလို့ ဆိုရမယျ။ သူ့တဈ ကိုယျလုံးမှာ အမှေးတှရှေိပွီး နီရဲနတေယျ။ဒါကွောငျ့ သူ့ကို သရဲမှေးနီလို့ ချေါတယျ။ သူလညျး တငျမောငျနီကနေ မှေးနီဖွဈသှား တယျ။ နကျတုံးကလညျး နကျကြျော ဖွဈ သှားတယျ။ သူတို့က ထောငျကို သခြော စောငျ့ရှောကျပွီး အုတျရိုးကြျောတကျပွေး တဲ့ အကဉျြးသားဆိုရငျ တှနျးခတြာတို့၊ လညျပငျးညှဈတာတို့ လုပျတယျ။
တောငျငူထောငျမှာဆိုရငျလညျး သေ ဒဏျပေးခံလိုကျရတဲ့ သံတောငျကရငျမ ဆို တာရှိတယျ။ သူ့ အကွောငျးကို တောငျငူ ထောငျမှာ နခေဲ့တဲ့သူတိုငျး ကွားဖူးကွပါ တယျ။ကရငျမက သံတောငျဇာတိဖွဈပွီး တောငျငူမွို့ကို ဗုံးခှဲဖို့ လကျပဈဗုံးတှကေို ကှမျးသီးတောငျးထဲထညျ့သယျလာပွီး ခှဲခဲ့ တာလို့ သိရတယျ။ သူလညျး မဆလခတျေ က သဒေဏျပေးခံရပွီး တောငျငူထောငျ အစောငျ့အဖွဈ အခုထိရှိနတေုနျးပဲလို့ ဆို တယျ။ပွဈဒဏျမလှတျသေးတဲ့ ဝိညာဉျတှေ ကို ခြုပျထားတဲ့ ဝရမျးတှကေို အငျးစိနျ ထောငျ ရိက်ျခာဂိုဒေါငျအပျေါထပျမှာ သိမျး ထားတယျ။ သူတို့တှကေို လှတျပေးသငျ့တဲ့ အခြိနျရောကျရငျ အပျေါထပျတကျ ဝရမျး ယူပွီး ထောငျကနေ အမိနျ့ပွနျတမျးနဲ့ ကောငျးရာမှနျရာ ဘဝကိုရောကျရှိဖို့ စီမံ ပေးလရှေိ့တယျ။
တခြို့ကွိုးဒဏျနဲ့ ထောငျဒဏျ ကနျြသေးတဲ့ ဝိညာဉျတှကေိုတော့ လှတျမပေးဘဲ ရုံးမှာထိနျးသိမျးထားတယျ။ ဒီလိုထိနျးသိမျးခံထားရတဲ့ ဝိညာဉျတှဟော ထောငျထဲမှာပဲနပွေီး တခြို့ကို ထောငျကြ အကဉျြးသားတှေ ကွုံဆုံခဲ့ကွရတာ ဖွဈပါ တယျ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ထောငျထဲက ပရလောကသားတှရေဲ့ အကွောငျးကတော့ ယခုအခြိနျအထိ ထောငျကြ အကဉျြးသား တှရေဲ့ ပါးစပျဖြားမှာ ရှိနမွေဲပါပဲ။
(သူတို့ပွောသော ထောငျအတှငျးမှ ပရလောကသားမြား ဇာတျလမျးတှငျ အသေးစိတျရေးသားဖျောပွရမညျ့ လူလိမျ ဝိဇ်ဇာဖွဈခဲ့ရသညျ့ ကြျောမွငျ့ နှငျ့ မိခငျ ဒျေါကွညျ၏ ဘဝဇာတျလမျးစုံ၊ ထောငျ အုတျတံတိုငျးပျေါက ထှကျပွေးတဲ့ အကဉျြး သားတိုငျးကို ထောငျထဲပွနျတှနျးခတြဲ့ သရဲ မှေးနီ၊ နကျတုံး၊ သံတောငျကရငျမနှငျ့ ကကွီးထောငျတှမှော ကငျြလညျနသေော ပရလောကသားမြားအကွောငျးကို မကွာခငျထှကျရှိမညျ့ လုံးခငျြး ဝတ်ထုတှငျ အပွညျ့အစုံ ရေးသားဖျောပွသှားမညျဖွဈကွောငျး စာဖတျသူမြားအား လေးစားစှာအသိပေး အပျပါသညျ။)
Credit – ဇျောသကျထှေး
အခနျး ( ၁ ) မှ အစအဆုံး ဖတျရှုလိုပါက ဒီမှာနှိပျပါ
အခြား သူတွေ ရောဂါမကူးစက်အောင် ကားဂိုဒေါင်ထဲမှာ ရက်ပေါင်းများစွာ ပုန်းအောင်းနေခဲ့တဲ့ ဝူဟန်မြို့ကကျောင်းသားလေး.. လေးစားပါတယ်
သတိထားပြီး မစားသင့်တဲ့ အစိမ်းရောင်သန်းနေတဲ့ အာလူး…မသိသေးတဲ့သူတွေ သိအောင် SHARE လုပ်ပေးကြပါခင်ဗျ
လူ အေ ယာက် (၁၀၀) မှာ (၉၈) ယောက်လောက် အဖြေ မှန် မရတဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်